40 Qof Shacab ah oo ku dhintay Rabshado ka dhacay wadanka Ciraaq.
Saturday October 26, 2019 - 18:47:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Ciraaq waxaa dib uga bilaawday dibadbaxayadii aadka uxooganaa ee loogasoo horjeeday dib udhaca dhanka dhaqaalaha ah ee wadanka kajira.
Wararka ka imaanaya ciraaq ayaa sheegaya in iskusoo baxyo shalay dhacay ay isku bedeleen kuwa rabshada wata oo dad badan ay ku dhinteen.
Ugu yaraan 40 qof oo shiico ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen iskusoo baxayo rabshada wata oo ka dhacay gobollada Koonfurta Ciraaq dhaca iyo magaalada Baqdaad, saraakiisha booliska ayaa sheegay in dhimashada ugu badan ay ka dhalatay markii dadka dibad baxyada dhigaya ay isku dayeen in ay xoog ku galaan saldhigyo iyo xarumo ay maleeshiyaadka xashdiga shiiciga ah ay ku leeyihiin Baqdaad.
Toogasho ka dhacday magaalada Alnaasiriyah ee muxaafadada Diiqaar waxaa ku dhintay 5 qof, dad caraysan ayaa damcay in ay xoog ku galaan xarunta xisbiga isku magacaabay Casaa'ib Ahlul Xaq balse maleeshiyaadkii ilaalada ka ahaa ayaa rasaas oodda uga qaaday.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamo ilaalad ka hayay xarunta Xisbiga Xaydar Alcabaadi Raysal wasaarihii hore ee Ciraaq ay geysteen xasuuqa ugu daran, saraakiisha booliska xukuumadda ciraaq ayaa iska fogeeyay in ay ku lug lahaayeen dadkii shalay lalaayay waxayna wixii dhacay mas'uuliyadooda dusha uga tuureen hoggaamiyaasha xisbiyada oo maleeshiyaadkoodu ay rasaas ku fureen mudaaharaadayaasha, rabshadahan waxay imaanayaan iyadoo guddi loo saaray baaritaannada dadkii lagu laayay kacdoonnadii dhacay bishii lasoo saaray ay sheegeen in dhammaan dadka ladilay dhabarka iyo madaxa laga toogtay taas oo ka dhigneed in ciidamadu shacabka si ulakac ah u dileen.
Dadka ku dhaqan koonfurta Ciraaq ee shiicadu ubadantahay ayaa ka sheeganaya faqri,musuq maasuq iyo shaqa la'aan kadib markii ay madaxda dowladdu xadeen hantidii dadweynaha kawada dhaxaysay.
Iska hor'imaadyo iyo dibad baxyo rabshada wata oo ka dhacay magaalada Beledweyne.
Weeraro khasaara dhaliyay oo ka dhacay Jubbada Hoose, Sh/hoose iyo Hiiraan.